Bakhala ngomasipala woMsunduzi abahola impesheni eSobantu | News24
Bakhala ngomasipala woMsunduzi abahola impesheni eSobantu
Izaguga ebezihambele umhlangano oyisiphesheli nekhansela ngeledlule.PHOTO:nokuthula khanyile
IZAGUGA ezingaphansi kuka Ward 35 ohlanganisa iSobantu, Mountain Rise kanye ne-Lincoln Meade zivulelane isifuba nekhansela uSandile Dlamini emhlanganweni oyisipesheli obusehholo lomphakathi eSobantu ngoLwesine owedlule.
Kulomhlangano bekumenywe kuphela amalunga omphakathi aneminyaka engu 60 kuya phezulu ukuba bazoveza izimvo zawo aphinde futhi aveza uma kukhona izinto angeneme ngazo ezenzeka kulewadi.
Phakathi kwezinto ebeziseqhulwini kulomhlangano nokuvele ukuthi ziyizingqinamba kakhulu izikweletu zikagesi namanzi ezivela kumasipala woMsunduzi lezaguga ezikhale ngazo.
“Siyacela khansela ukuthi usilungisele inkinga yezikweletu zamanzi nogesi ezisabekayo esezize zafakwa kubammeli esingazi ukuthi sizozikhokhela ngani ngoba asisebenzi sihola impesheni. Lena iyona nkinga ekhungethe ingxenye yethu njengoba silapha, kusifaka ingcindezi ngoba ezinye zalezikweletu asazi ukuthi sizozikhokha ngani ngoba nabantwana bethu abasebenzi.”
Elinye ilunga lomphakathi licele ukuthi okungenani ikhansela licele umasipala ukuthi ubanike isaphulelo sika 50% bese ubakhipha nakubammeli.
“ISobantu ilokishi eliwulwele kakhulu umzabalazo wakuleli ukuze sikhululeke. Ukucishelwa kwethu izikweletu zamanzi nogesi kungaba indlela umasipala angabe usibonga ngayo ngendima esayidlala ukuze elakuleli libe nohulumeni wentandoyeningi.”
“Okunye okuyinkinga ukuthi izincwadi zakamasipala zama-rates zifika sekudlule isikhathi. Thina imali yethu yempesheni siyithola mhlaka 5 no 6 nyangazonke, okufike kukhathaze ukuthi sihlala nalemali sigcine siyisebenzisele ezinye izidingo ngoba izincwadi zingafiki ngesikhathi,” kubeka ilunga lomphakathi.
Omunye uzwakalise ukungenami ngendlela ugesi wekhadi osebenza ngayo.
“Sifuna umasipala okanye u-Eskom uke uzositshela ukuthi kwenziwa yini masithenga ugesi wekhadi ka R100 kungene kuphela oka R60?
Okunye okusihlukumezayo njengabantu abadala ukuthi izindawo ezidayisa logesi wekhadi zisedolobheni kuze kudingeke ukuthi sigibele bekungeke yini kwenzeke umasipala enze lesindawo zibe seduzane nalapho sihlala khona?”
Ikhansela lendawo uDlamini uthe inhloso yomhlangano bekuwukuthola ukuthi izaguga zihleli kanjani.
“Njengekomidi le-wadi sikholelwa kakhulu ekutheni uma wazi imuva lakho ikusasa lakho liqhakazile. Abantu abadala bayizinsika zethu ngakho kubalulekile ukuthi sihlale nabo phansi sithole ukuthi baphila kanjani futhi iziphi izingqinamba ababhekene nazo. Isikhathi esiningi uma kunemihlangano yomphakathi abalitholi ithuba lokubeka izimvo zabo.”
UDlamini uthe wonke amaphuzu abekiwe bebewabhala phansi kanti bazowadlulisela kumasipala baphinde bahlele omunye umhlangano sebememe izinhlaka ezithintekayo.